नेपाल आज | ‘पर्व’ ‘क्लासिक’ ‘नोभेम्बर रेन’ सबै हिट, प्रसादको भाग्य के होला ? (भिडियोसहित)
‘पर्व’ ‘क्लासिक’ ‘नोभेम्बर रेन’ सबै हिट, प्रसादको भाग्य के होला ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । फिल्म पत्रकार सुशील पौडेल कक्षा ९ मा पढ्थे । धेरैजसो समय उनको दिमागमा कथाले डेरा जमाउथ्यो । उनी सोच्दै जान्थे । जस्तो महाकवि देवकोटाले एउटा चुरोटको सर्को तान्दा तान्दै कविता बनाइसक्थे । त्यस्तै पौडेलको दिमागमा पनि कथाले धेरै जालो बनायो । ती जालोमा धेरै माकुरा र माकुरी पात्र बने । तर, समयको अन्तरालसँगै जालो चुडिदैं गयो भत्किदैं गयो । तर एउटा कथाले भने २० वर्षपछि जीवीत पात्र पाएको छ । अर्थात्, उक्त कथामा फिल्म नै तयार भएको छ ।
सुशीलको त्यही २० वर्षअघि दिमागमा घुमेर मनमा बसेको कथा हो ‘प्रसाद’ । पेशाले उनी पत्रकार । हुन त पत्रकारलाई लेख्न अल्छी लाग्नु नपर्ने । तैपनि मनमा बसेको उक्त कथा लेख्न उनलाई साह्रै अल्छि लाग्थ्यो । त्यत्तिकैमा उनको भेट दिनेश राउतसँग भयो । राउत नोभेम्बर रेन, क्लासिकजस्ता चर्र्चित फिल्मका निर्देशक हुन् । सुशीलले उक्त कथा राउतलाई सुनाए । सुरूमा त उनले पनि खासै प्रतिक्रिया जनाएनन् । तर पछि राउतले पनि हौस्याए, ‘यो त तपाईंले लेख्नै पर्छ ।’ यसकै फल हो ‘प्रसाद’ ।
फिल्मलाई दिनेश राउतले नै निर्देशन गरे । विशेषगरी लभ स्टोरी ‘जनरा’को फिल्ममा ‘एक्सन कट’ गरेका राउतलाई ‘प्रसाद’ फरक धारको फिल्म थियो ।
सुशील फिल्म समिक्षक पनि हुन् । उनले धेरै फिल्मको टिप्पणी गरे । राम्रा र नराम्रा पाटा केलाए । सुधानुपर्ने ठाउँमा सुझाव दिए । अब ‘प्रसाद’ उनको परीक्षा हो । भन्नु र गर्नुको फरक र यसको स्वाद पनि उनले यस फिल्मबाट पाएका छन् । तर एक समीक्षकको लागि यो फिल्म चुनौती नभएर अवसर भएको भन्दै उनले थपे, ‘अरुको फिल्मको कमजमाजोरी औल्याएको समयमा आफंैले लेख्न पाउनु अवसर हो । चुनौती त काम गर्दै जाने क्रममा आइ नै हाल्छ ।’
मंसिर २१ गतेबाट नेपालभर प्रदर्शनमा आउने फिल्मको संगीतलाई दर्शकले औधी रूचाएका छन् । नेपाली समाजमा भएको अन्तरजातीय विवाह, जिन्दगी बनाउनको लागि सहर बसाइ र सन्तान प्राप्ति नहुँदा पतिपत्नीको सम्बन्धमा आउने तिक्ततालाई फिल्मले बोल्छ । फिल्म समाजसँग बढी नजिक भएको निर्देशक राउतले बताए । उनी वर्षमा एउटा फिल्ममा काम गर्छन् । त्यसकारण पनि कुनै फिल्ममा काम गर्ने भनिसकेपछि उनलाई कहिले सुटिङ शुरू होला जस्तो लाग्छ ।
फिल्ममा बाबुरामको भूमिका निभाएका बिपिन कार्कीप्रति उनी निकै खुसी छन् । हुन त बिपिनको अभिनयमा शंका नै कसले गर्छ र ? यस फिल्ममा पनि बिपिनले आफूलाई फरक बनाउनबाट चुकेनन् । राउत भन्छन्, ‘बाबुरामको क्यारेक्टरलाई जे सोचेको थियौं बिपिनले त्यो भन्दा एक स्टेपमाथि उठेर दिनुभएको छ ।’
फिल्ममा अर्का कलाकारको भूमिकामा निश्चल बस्नेत आबद्ध छन् । उनी पनि निर्देशक । निर्देशकलाई काम गराउन धेरै सजिलो हुने राउतको बुझाइ छ । उनले भने, ‘सुटिङमा निश्चलले म निर्देशक हो भनेर फिल गराएनन् । मैले पनि त्यो फिल गर्ने कुरा आएन । निर्देशक भएको कारण पनि उसलाई प्राविधिक कुराको राम्रो ज्ञान छ । त्यसकारण काम गर्न झनै सहज भयो ।’
राउतमा पनि सानोमा बैंकमा काम गर्ने लक्ष्य थियो । उमेरअनुसार लक्षय पनि फेरिदैं गयो । तर आफू अलि परिपक्व भएपछि भने उनले तय गरिसकेका थिए । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा केही न केही गर्ने । हिरो नै बन्छु भन्ने थिएन तर पर्दापछाडि या टेक्निसियनको रूपमा मात्रै भएपनि उनलाई फिल्म क्षेत्रमा नै आउने सपना थियो ।
नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा वर्षौ थुप्रै किताब प्रकाशन हुन्छन् । तर फिल्मको लागि स्क्रिप्ट भने अत्यन्तै कम । अझ व्यवसायिक स्क्रिप्ट लेखक त औंलामा गनिन्छन् । सुशील भन्छन्, ‘पटकथा लेखनमा नयाँ र क्षमतावान् लेखक आउन जरूरी छ । त्यो कोटीमा म पर्दिन पनि होला । व्यवसायिक लेखक हुन्छु भनेर होेइन पुरानो सोचलाई मूर्त रूप दिनको लागि मात्र मैले फिल्मको कथा लेखेको हुँ ।’
आजको दिनमा फिल्मको कथा लेख्छु भन्दा चुनौती कहाँनेर छ भन्ने प्रश्नमा सुशीलले भने, ‘फिल्ममा लेख्न थाल्दा धेरै झमेला हुने । पैसा त एउटा पाटो हुने नै भयो । यदि कतै कथा काटियो भने काट्दा लेखकलाई चित्त बुझ्दैन । त्यसको साटो पुस्तक लेख्दा रोयल्टी पाइन्छ सँगै राम्रो नाम पनि कमाइन्छ । त्यसकाराण साहित्यमा धेरै किताब आउँदा पनि फिल्म लेखनमा मान्छे छैनन् । भन्नलाई स्क्रिप्ट लेखकलाई फिल्मको मेरुदण्ड भनिन्छ तर त्यसमा लगानी गर्न मान्दैनन् ।’
सुशील पौडेल प्रसाद दिनेश राउत